नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरो झरेपछि यात्रुहरूकाे यस्तो विपत! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरो झरेपछि यात्रुहरूकाे यस्तो विपत!
काठमाडौं, २७ असार । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरो झरेका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सडकमा पहिरो झरेपछि अहिले सो खण्डमा मुस्किलले एकतर्फी मात्रै गाडी चलिरहेका छन् ।
बिहीबार राति भएको वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । यो सडक खण्डको सत्र किलोमा बिहीबार राति १० बजेतिर पहिरो खसेकाले एकतर्फी रुपमा मात्रै गाडी चलेको र ठूलो पानी परिरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एकतर्फी रुपमा आलोपालो गरी मात्रै गाडी चलेकाले लामो जाम भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । यो सडक खण्ड निर्माणका क्रममा अघिल्लो वर्ष पनि पहिरोका कारण यात्रुले सास्ती बेहोर्नु परेको थियो । वर्षा लागेसँगै यस खण्डमा वर्षेनी पहिरोको समस्या बढ्ने गरेको छ ।
अबिरल बर्षाका कारण पहिरोले ३ जनाकाे ज्यान लियो!
नौ जनाको हत्या हुँदा भागेर बाँचेकी सीता बारे आयो यस्तो खबर – पुरा हेर्नुहोस
विप्लवका सैन्य विभाग प्रमुख बोहरा पक्राउ
०७७ साल साउन १४ गते बुधबार, ई.सं. २०२० जुलाई २९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!